နည်းပညာကုန်ပစ္စည်းတင်ဆက်မှု | Gadget သတင်း
နည်းပညာကဏ္ very သည်သက်ရှိများစွာရှိသည်။ နေ့တိုင်းအမှတ်တံဆိပ် အသစ်သောနည်းပညာထုတ်ကုန်များကိုတင်ပြ စျေးကွက်နှင့်စားသုံးသူ wow ဖို့ကြိုးစားရန်။ Actualidad Gadget မှထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအားလုံး၏တင်ဆက်မှုအဖြစ်အပျက်များကိုသတင်းပို့ပါမည်။
အလိုရှိ နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ရန် Samsung, LG, Sony, Apple, Xioami နှင့်အခြားမည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များပါ ၀ င်သနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ဒီအပိုင်းကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့ သင့်ကိုကမ်းလှမ်းပါတယ် သီးသန့်ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယ်ဒီတာအဖွဲ့အဖွဲ့ကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
por Paco L ကို Gutierrez လွန်ခဲ့တဲ့ 8 လအတွင်း .
por Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
Poco F2 Pro: ဖန်သားပြင်ပိုများလာခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းပိုများခြင်း
Pocophone ဟုခေါ်သော Xiaomi ၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီသည် Poco F1 နှင့်ဆိပ်ကမ်းဈေးကွက်သို့လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကရောက်ရှိခဲ့သည်။
Exynos 9825: Galaxy Note 10 ၏ပရိုဆက်ဆာ
por Eder Esteban လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
Galaxy Note 10 နှင့် 10+ တို့သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ Samsung သည်၎င်း၏ high-end သစ်နှင့်ဘာတွေထွက်သွားသည်ကိုငါတို့သိပြီးဖြစ်သည်။
por Rafa Rodríguez Ballesteros လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
ဤသည်အသစ်နှင့်အံ့မခန်းတက်စလာမော်ဒယ် Y ကိုဖြစ်ပါတယ်
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Elon Musk ပင်လျှင်သူကိုယ်တိုင်သံသယ ၀ င်မိပြီးဟာသကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အာရှထုတ်လုပ်သူ Huawei မည်သို့အစားထိုးဖြစ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
Samsung Galaxy Fold နဲ့ Huawei Mate X တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်
Sony သည်ကမ္ဘာ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုရည်ညွှန်းပွဲဖြစ်သည့် MWC တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောစောထစေခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ...
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀ ရက်ကိုပြက္ခဒိန်မှာအချိန်အတော်ကြာမှတ်သားထားတယ်။ ဒီနေ့တော့ Samsung နေ့ပဲ ...
ဒီမှာ Huawei Mate 20 နဲ့ 20 Pro ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါပြီ
ဒီနေ့စတင်နေပြီဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei Mate မော်ဒယ်သစ်ကိုတရားဝင်မြင်တွေ့နိုင်သည်။